जिवनमा सबैभन्दा ठुलो धर्म कमाउन चहानुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस !! | सुदुरपश्चिम खबर
जिवनमा सबैभन्दा ठुलो धर्म कमाउन चहानुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस !!
सबैभन्दा ठूलो धर्म कमाउन चाहनुहुन्छ भने स्त्रीको यो अंगलाई छुनुपर्छ । हरेक मानिस पापी हुन्छन्, चाहे बुझेर या नबुझेर पाप कर्म गर्छन्, तर सबैलाई जब आफ्नो पापकर्मको महसुस भएसँगै उनीहरु यसबाट मुक्ति चाहन्छन् । यसका लागि उनिहरु गंगामा स्नान गर्न जान्छन् र ठान्दछन् पाप पखालियो। रहिन्दु धर्मका अनुसार जब हामी कोही आदरणीय व्यक्तिको चरण छुन्छौं,आशिर्वादसँगै उक्त व्यक्तिको हात हाम्रो सिरमाथी पुगेर हाम्रो हातले उनको चरणमा स्पर्श गर्छ ।
जसकारण हामीलाई सकरात्मक उर्जा पैदा गर्नमा मद्दत मिल्छ । जसले हाम्रो मानसिक विकास समेत गराउँछ । आफू भन्दा ठूला जसलाई हामी मान सम्मान गरिन्छ उनीहरुको पाउको स्पर्श गरेमा सबै पाप पखालिन्छ र हामीलाई धेरै पुण्य पनि मिल्छ । यसबाट हामीलाई भगवान एकदमै खुसी भएर हामीलाई कृपा बनाइराख्नुहुन्छ ।प्राचीन समयमा उठ्नेदेखि सुत्नेसम्म हरेक कुराका एक नियम हुन्थ्यो । त्यही कारण उक्त समयमा मानिसहरु एकदमै तन्दुरुस्त, निरोगी र दीर्घजीवि हुन्थे । उनीहरुमा अहिलेजस्तो अनेक किसिमको रोग लाग्दैनथ्यो ।
किनभने, उनीहरुको जीवनशैली अनुशासित हुन्थ्यो । नियमबद्ध हुन्थ्यो । यी सारा नियमको बारेमा आयुर्वेदमा उल्लेख छ । यदि अहिले पनि यस नियमलाई पच्छ्याउने हो भने, निरोगी रहन सक्छौं ।आयुर्वेदिक ढंगले स्वास्थ्यलाई रोगमुक्त राख्न सकिन्छ । हुन त यस्ता दिनचर्यामा अभ्यस्त हुन अलि गाह्रो पर्छ । किनभने हामी अनुशासनहिन बन्दै गएका छौं ।हाम्रो दिनचर्या सिलसिलावद्ध छैन।खानपानदेखि उठ्ने–सुत्ने तालिका समेत लथालिंग छ ।
यदि आयुर्वेदको दिनचर्या पद्धती अपनाउने हो भने, स्वास्थ्यमा केहि परिवर्तन अनुभव गर्न सकिनेछ । यसको बारेमा आयुर्वेदमा विस्तारमा बताइएको छ । हामीले दैनिक जीवनका यसलाई अनुशरण गर्न सक्छौं ।सूर्यादयअघि उठौं ःआयुर्वेद भन्छ, आफ्नो दिनको सुरुवात घाम उदाउनुअघि गर्नुपर्छ । नभएपनि सूर्योदयसँगै उठ्ने अभ्यास गरौं । यसले गर्दा आफ्नो पुरा दिन सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न पाइन्छ ।
आयुर्वेदमा स्वतः बिहान उठ्नुपर्ने वताएको छ । यसका लागि अलार्मको भर पर्नु हुँदैन ।खुब स्वास लिनेःब्रेकफास्ट गर्नुअघि खाली पेट व्यायाम एवं योग गर्नुपर्छ । यसले शरीरमा नयाँ उर्जा प्रवाह गर्नका साथै रक्त संचारलाई पनि बढाइदिन्छ । खुला हावामा उभिएर ५ देखि १० मिनेटसम्म पुरा फोक्सो फुलार सास लिनुपर्छ । यसले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पुरा गर्छ । साथै फोक्सो स्वस्थ्य र बलियो बन्छ ।मनतातो पानी पिउनेःनियमित रुपमा दिनमा दुई, चार गिलास मनतातो पानी पिउनुपर्छ । यसले पाचन प्रक्रिया चुस्त एवं तन्दुरुस्त हुन्छ । मुटु रोगको खतरा पनि कम हुन्छ ।
नास्ता गरौंःआयुर्वेदमा उल्लेख भए अनुसार बिहानको नास्ता लिनैपर्छ । बिहान नास्ता गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । नास्ता ७ देखि ९ बजेको बीचमा लिनुपर्छ । यसले मस्तिष्क सक्रिय रहन्छ । इनर्जी लेभल बढ्छ ।सही खानपान गरौंःहरेक दिन नियमित तालिका अनुसार खानेकुरा सेवन गरौं । खानेकुरा सुपाच्य, सन्तुलित होस् । तर, एकै पटकमा थरीथरीका खानेकुरा सेवन नगरौं ।
बरु दिनभरमा पटक–पटक थरीथरीका खानेकुराको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । विजातिय खानेकुरा सेवन नगरौं । सकेसम्म सात्विक भोजन लिनुपर्छ । मसला कम भएको, शाकाहारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।खाना अघि पानी पिउनु हुँदैनःखाना खानुअघि वा खाना खाए लगत्तै पानी पिउनु हुँदैन । खाना खानु आधा घण्टा अघि वा पछि मात्र पानी पिउनुपर्छ । यद्यपी खानाका साथमा थोरै पानी सेवन गर्न सकिन्छ ।खाना खाएपछि नुहाउन हुन्नःखाना खाए लगत्तै तुरुन्तै बलको काम नगरौं ।
साथै नुहाउनु पनि हुँदैन । खाना खानसाथ सुत्नु हुँदैन ।केही समय घाममाःहरेक दिन कम्तीमा आधा घण्टा घाममा बिताउनुपर्छ । यसले भिटामिन डि प्राप्त हुन्छ । शरीरको कतिपय दुखाई कम हुन्छ ।सोझो पोजिसनमा बसौंःकुप्रिएर, झुकेर, खुम्चिएर बस्नु हुँदैन । यसरी बस्दा शरीरका भित्री अंगहरुको कार्य संचालनमा बाधा पुगिरहेको हुन्छ । सोझो वा मेरुदण्डलाई सिधा बनाएर बस्नुपर्छ ।गहिरो निन्द्रा आवश्यकःहरेक दिन कम्तीमा सात वा आठ घण्टा सुत्नैपर्छ । सुत्ने कोठा खुला वा हावा आउजाउ गर्ने हुनुपर्छ । सुत्ने समयमा मनमा अनेक कुरा खेलाउनु हुँदैन । (gnewsnepal.com बाट सभार)